Parsely: Izibalo Zokushicilela Okuqukethwe Kwenziwe Right | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 19, 2016 NgoLwesihlanu, Agasti 19, 2016 Douglas Karr
Uma inkampani yakho itshala imali ekwakhiweni kokuqukethwe, uzothola okujwayelekile analytics akukho okungaphansi kokukhungatheka. Nazi izizathu ezimbalwa… abalobi, imikhakha, izinsuku zokushicilela nokumaka. Kunemibuzo ethile otholwa yinkampani yakho ongeke ukwazi ukuyiphendula:
Yikuphi okuqukethwe esikushicilele kule nyanga okusebenze kahle kakhulu?
Yimuphi umbhali ohambisa ithrafikhi enkulu esizeni sethu?
Yimaphi amathegi athandwa kakhulu?
Yiziphi izigaba zokuqukethwe ezithandwa kakhulu?
Hlaziya.ly abambisene nabashicileli bedijithali ukuhlinzeka ngemininingwane ecacile yezithameli ngokusebenzisa enembile analytics ipulatifomu. Izinkulungwane zababhali, abahleli, abaphathi besayithi, kanye nochwepheshe bezobuchwepheshe sezivele ziyazisebenzisa Hlaziya.ly ukuqonda ukuthi yikuphi okuqukethwe okuheha izivakashi zewebhusayithi, futhi kungani Ama-dashboard nama-API e-Parse.ly asetshenziswa ngamakhasimende ukwakha amasu edijithali aphumelelayo awavumela ukuba akhule futhi ahlanganyele izethameli eziqotho.
I-Parse.ly yehlisela ukusebenza kokuqukethwe kwakho kuma-dashbhodi agaya kalula, kufaka phakathi ukubuka konke, ukusebenza kombhali, idivaysi, ukubukwa komlando, ukusebenza kweposi, ukusebenza kwesigaba, kanye nababhekisi. Ungakhipha futhi uthumele imibiko.
Izici zikaParse.ly zifaka:
Okuqukethwe Amadeshibhodi - Ama-dashboard wokuqukethwe wesikhathi sangempela kaParse.ly manje athembekile ngabasebenzi bamasayithi angaphezu kwe-700 wezindawo ezihamba phambili zewebhu, kufaka phakathi iTechCrunch neThe The Intercept. Ixhasa ukubulawa kwamamethrikhi angaphandle kwebhokisi, njengokubukwa, izivakashi, isikhathi, nokwabelana.
API - I-Parse.ly's API ifingqa ulwazi olumayelana nethrafikhi nokuqukethwe ngenhloso yokuhlinzeka ngokushesha indlela yokuhlinzeka ngezixhumanisi zokuqukethwe esizeni; izifinyezo zethrafikhi zokuthunyelwa kwedatha okusheshayo; noma ukuhlanganiswa okulula kwedatha yethrafikhi yeParse.ly nezinhlelo ezikhona zokuphathwa kokuqukethwe. Ithuluzi lokuhlanganisa ukufaka ngokushesha amasayithi akhona, izinhlelo zokusebenza, nemibiko ngedatha yeParse.ly - kufaka phakathi idatha yethu yesikhathi sangempela.
Iphayiphi ledatha - IPayipi ledatha likaParse.ly yi-API yokugcina, eletha idatha eluhlaza emayelana namasayithi akho, izinhlelo zokusebenza, nabasebenzisi, ngokungqubuzana okuncane nokuguquguquka okuphezulu. Kuyindlela ecebile yokuvula i-100% yedatha engemuva kukaParse.ly's analytics, bese uyihlaziya ngezidingo zenhlangano yakho. Kuyinto ejwayelekile, futhi ingaxhasa imicimbi yangokwezifiso yazo zonke izinhlobo. Unentshisekelo yokulinganisa ukujula kwescroll, isenzo sokwabelana esizeni, ukuchofoza kokuncoma kokuqukethwe, okuvelayo kwesikhangiso, noma okubhaliselwe kwencwadi yezindaba? Ngayinye yalezi zingenziwa imodeli njengomcimbi oluhlaza, zithunyelwe kuParse.ly, futhi zilethwe ngePayipi ledatha.
Okuthunyelwe kwesikrini okuthunyelwe
Kubika i-Screen Parse.ly
Ukubukwa Kwezomlando Khombisa Okuthunyelwe Parse.ly
Sibutsetelo Screenshot Parse.ly
Amadivayisi Isikrini Parse.ly
Ababhali Screen Parse.ly
Izikhombi Screen Parse.ly
Tags: amamethrikhi ezethameliizibalo zokuqukethweukuqonda kokuqukethweamamethrikhi wokuqukethweamamethrikhi wokusebenza kokuqukethwehlaziya.lyngokweqileukulandelela ababhaliukulandela ngomkhondo ngosuku lokushicilelwaimikhakha yokulandelelaomaki bokulandelela